Britain: Wararkii ugu danbeeyay ee dilkii Xil. David Amess
Dilkii toorreyda loo adeegsaday ee xildhibaan ka tirsanaa baarlamaanka Britain David Amess ayay Sabtida maanta ah booliisku ku sheegeen inuu ahaa fal argagixiso, waxaana xildhibaanada dalkaasi ay riixayaan in la adkeeyo amniga mudaneyaasha ka dib dilka xildhibaankii labaad ee u dhashay UK oo la dilay isaga oo la kulmayay dadka deegaan-doorashadiisa muddo shan sano gudahood ah.
Xildhibaan David Amess oo 69 jir ah kana tirsanaa xisbiga Conservative ayaa codeeyeyaasha kula hadlayay kaniisad ku taalla magaalada yar ee Leigh-on-Sea ee bariga London markii toorey lagu dilay Jimcihii.
Booliiska ayaa xiray eedeysane 25 jir ah, waxayna wadaan baaritaanka la xiriira “suurtagalnimada in kooxaha xagjiriinta Islaamiga ah ay dhiirrigeliyeen.”
Booliiska ayaa sheegay in baaritaanku uu ku jiro “marxaladdiisii hore” inkastoo dhowr warbaahin oo British ah ay wariyeen in eedeysanaha la aamminsan yahay in uu ahaa nin haysta dhalashada Britain asalkiisuna yahay Soomaali.
Wargeyska The Sun ayaa wariyay in ninka weerarka qaaday uu dhowr mar mindi la dhacay xildhibaanka, iyadoo ay goobta joogeen laba dumar ah oo xildhibaanka la shaqeynayay ka dibna uu fadhiistay si uu u sugo in booliisku ay goobta soo gaaraan.
Booliisku waxa ay sheegeen in ay aaminsan yihiin in eedeysanuhu uu kaligiis ku kacay weerarka, uuna sii baaray laba cinwaan oo ku yaalla aagga magaalada London.
Ra’iisulwasaare Boris Johnson ayaa Sabtida maanta ah booqday goobta uu dilku ka dhacay, isagoo ubaxyo dhigay bannaanka kaniisadda, waxaana wehliyay hoggaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Shaqaalaha Keir Starmer oo ay ku muujinayeen wadajir, waxaana la socday afhayeenka Aqalka Hoose Lindsay Hoyle iyo Xoghayaha Arrimaha Gudaha Priti Patel.
Xoghayaha arrimaha gudaha ee Britain Patel ayaa ku amartay booliska dalkaasi in ay dib u eegaan amniga dhammaan 650-ka xildhibaan ee baarlamaanka.